Inkampani Culture - Huizhou Jinhaocheng Co., Ltd
Nge imikhiqizo phezulu izinga, okukhulu emva-sales yesevisi nenqubomgomo yesiqinisekiso, thina umethembe esibambisene eziningi phesheya, feedbacks eziningi ezinhle ukwanda imboni yethu.
Sihlala sibambelele isimiso ohambweni yenkampani "ngikhuluma iqiniso, professional, ephumelelayo futhi emisha", futhi: ake bonke abashayeli ukujabulela ukushayela yabo ebusuku, ake abasebenzi bethu ingafinyelela value abo okuphila, futhi ukuba namandla futhi inkonzo abantu abaningi. Sizimisele babe integrator umkhiqizo emakethe yethu futhi eyodwa-stop wesevisi umkhiqizo emakethe yethu.
Sihlala singaphoqi wumgomo ukuphathwa "Ikhwalithi Okokuqala, Ubuchwepheshe Isisekelo, Ukuthembeka Ukuqamba" .Thina bayakwazi ukuthi uthuthukise imikhiqizo emisha ngokuqhubekayo ezingeni eliphakeme ukwanelisa izidingo ezahlukene amakhasimende.
Sine esiqinile futhi ephelele ukulawula izinga uhlelo, iqinisekisa ukuthi ngomkhiqizo ngamunye singatholakala nezimfuneko izinga amakhasimende. Ngaphandle kwalokho, yonke imikhiqizo yethu ziye ngokuqinile zihlolwe ingakafiki imithwalo.
Amakhono Ethu & Ubuchwepheshe
Sigxilisa "kube nongoti creditable ukufeza ukuthuthukiswa okuqhubekayo kanye emisha" njengoba Isiqubulo sethu. Sithanda ukuthi wabelane nakho kwethu abangane ekhaya aphesheya, njengendlela ukudala ikhekhe esikhulu imizamo yethu ngokuhlanganyela. Sine eziningana wazibonela R & D abantu futhi thina ukwamukela oda OEM.